सुदर्शन खतिवडा/काठमाडौं, २२ वैशाख । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र प्रतिपक्षी दल नयाँ शक्ति, पार्टी नेपालबीच शनिबार एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ । एकीकरणसँगै ‘समाजवादी पार्टी, नेपाल’ बनेको छ ।
सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी घोषणा गर्न लागिएको समाजवादी पार्टी, नेपालमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । सत्तारुढ नेकपामा जस्तै दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिए पनि कार्यविभाजनका दृष्टिले समाजवादी पार्टीले नयाँ अभ्यास सुरु गरेको देखिन्छ ।
साझापोस्टले फेला पारेको समाजवादी पार्टीको विधानमा ७ वटा संघीय/केन्द्रीय निकायहरु रहने उल्लेख गरिएको छ, जसमा सबैभन्दा माथि रहन्छ- संघीय परिषद् । त्यही परिषद्को नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले पाएका छन् । उनी पहिलो वरियतामा रहने भनिएको छ ।
दोस्रो वरियतामा रहने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष रहनेछन् । केन्द्रीय समितिभन्दा तल क्रमशः केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय विज्ञ परिषद, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग रहने छन् ।
दुई पार्टी एकीकरण घोषणासँगै सामाजिक सञ्जालमा डा. भट्टराई र यादवका अधिकारहरुको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ । साझापोस्टले फेला पारेको समाजवादी पार्टी, नेपालको दस्तावेजमा भट्टराईले नेतृत्व गर्ने संघीय परिषदको संरचना र अधिकार एवम यादवले नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय समितिको संरचना र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । भट्टराईले नेतृत्व गरेको संघीय परिषद्लाई ९ वटा अधिकार र कर्तव्यहरु दिइएका छन् ।
संघीय परिषद्को संरचना-
(१) पार्टीको एक सङ्घीय परिषद् रहने छ । यो दुई महाधिवेशनबिचको सर्वोच्च अङ्ग हुने छ ।
(२) सङ्घीय परिषदको अध्यक्षले यसको अध्यक्षता गर्ने छ । परिषदमा देहाय बमोजिमका निर्वाचित, पदेन तथा मनोनित सदस्यहरू रहने छन्-
१. पार्टी एकीकरणको बेला समायोजन गरिएका सदस्यहरू,
२. सङ्घीय/केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू,
३. प्रदेश समितिका अध्यक्षहरू,
४. तोकिएको सदस्य सङ्ख्याको मापदण्ड पुगेका पार्टीका सङ्घीय/केन्द्रीय जनसङ्गठनका संयन्त्रका प्रमुखहरू,
५. सामान्यतः समानुपातिक समावेशी प्रयोजनका लागि निर्वाचित तथा पदेन सदस्यहरूको कूल सङ्ख्याको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी केन्द्रीय समितिबाट मनोनित सदस्यहरू,
सङ्घीय परिषद्का अधिकार र कर्तव्यहरू
१. केन्द्रीय समितिले पेस गरेका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरी पारित गर्ने,
२. केन्द्रीय समितिका कार्यहरूको मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिने,
३. समसामयिक विषयहरूमा पार्टी नीति तय गर्ने तथा राजनीतिक प्रस्तावहरू पारित गर्ने ।
४. पार्टी कामको अवधिक समीक्षा र पार्टी सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने ।
५. कुनै कारणले केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष पद रिक्त भएको अवस्थामा ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहेको छ भने अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने,
६. केन्द्रीय समितिद्वारा गरिएको अनुशासनको कारबाही उपर पुनरावलोकन गर्ने,
७. केन्द्रीय समितिको आय-व्ययको आवधिक सुपरीवेक्षण गर्ने,
८. केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको काम कारबाहीलाई सुपरिवेक्षण गर्ने,
९. विधानमा तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय समितिमा संघीय परिषद् अध्यक्ष पनि रहनेछन् । यो समितिलाई विभिन्न १४ वटा अधिकार र कर्तव्यहरु दिइएको देखिन्छ । विधानको धारा १५ को उपधारा ३ मा केन्द्रीय समिति अध्यक्षलाई विशेष अधिकार समेत दिइएको छ । ‘संक्रमणकालको अवधिकालागि पार्टी एकता र समायोजनको प्रकृयालाई ध्यानमा राखी आगामि महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने गरी केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णयहरू लिन सक्ने छ,’ उक्त उपधारामा उल्लेख गरिएको छ ।
यो धाराले केन्द्रीय समितिलाई असीमित अधिकार दिएको देखिन्छ । यद्यपि, यहाँबाट हुने निर्णयहरुलाई संघीष परिषद्ले सच्याउन सक्नेछ । तर, संघीय परिषदको ठूलो संरचनाले बैठक बोलाइरहन र लोकतान्त्रिक तरिकाबाट निर्णय लिन भने कठिन प्रायः हुने देखिन्छ ।
नवगठित समाजवादी पार्टी, नेपालको विधानको धारा १८ मा पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । उक्त विधानलाई तोकेर संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. भट्टराईले के के गर्न पाउँछन् ? साझापोस्टलाई प्राप्त विधानका अनुसार भट्टराईका लागि ९ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार उपलब्ध छ ।
यहाँ पहिलो अधिकारको बारेमा नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई झस्किएका छन् । जहाँ उल्लेख गरिएको छ- ‘पार्टी प्रमुखको रूपमा पार्टीको समग्र कामको नेतृत्व गर्ने ।’ यहाँ केन्द्रीय समितिको अध्यक्षलाई पार्टी प्रमुख भनिएको छ । त्यसो भए डा. भट्टराईको भूमिका के ? ‍पहिलो वरियता भनिएपछि उपप्रमुख हुने कुरा नै भएन । प्रमुखभन्दा माथि के हो त ?
हस्ताक्षरको बेला याद नगरेका डा. भट्टराईले शनिबार दिउँसो आयोजित पार्टीको बैठकबाटै यसबारे फोरम अध्यक्ष यादवलाई बैठक स्थलबाटै फोन गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । ‘एउटै पार्टीमा दुईवटा प्रमुख हुने कुरा भएन, यो प्रमुख भुलवश आएको हो, मैले फोन गरेसकेँ, उहाँहरुले सच्याउने भन्नुभएको छ,’ भट्टराईको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।